MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'CUR CUR DOG' IYO SAWIRRO - EEYAHA
ARBA Ch. Rocktalk's Cosmo, oo uu leeyahay Ron Stoute
Mountain Cur waxaa loo kariyay awooddiisa shaqo. Waa eey kaydsan, cufan, eey shaqeynaya oo dhab ah, in kastoo xoogaa guud yahay, Muuqaalka Cur. Jaakada culus waxay u muuqataa inay ka sii dheereyso tan duufaanta, laakiin weli asal ahaan way gaaban tahay. Waa hagaagsan tahay ama qallafsan tahay oo jilicsan, hoostiisa marada hoose. Midabbada waxaa ka mid ah, jaalle, gogol, madow, bir iyo madow, badiyaa leh dhibco cad. Bixiyeyaashu waxay si sharaf leh u soo sheegaan in 50% ama in ka badan eeyo yaryar ay ku dhasheen bobtail. Qaar badan waxay ku dhasheen dhado cagaarkooda dambe iyo qaar labadoodaba lug kasta. Aad u xeel dheer, ballaadhan oo muruqyo leh madax adag, ballaaran oo dhegta gaaban, sare leh. Qoorta waa xoog badan tahay waana muruq. Indhuhu badanaa waa mugdi iyagoo leh muuji, muujinta muujinta. Madaxa waa qubbad fidsan oo ballaadhan indhaha dhexdooda. Afku wuu culus yahay. Dhegaha ayaa gaagaaban ama dhexdhexaad ah, meel sarena looga dhigay kontoroolka. Cagaha bisaduhu waa kuwo xoog badan oo murqo leh, oo xawaare loo dejiyey. Lugaha toosan waa muruq. Laabta ayaa qoto dheer dhabarkuna waa toosan yahay.
Kani ma aha eey adeecsan, eey fudud. Adkaysiga iyo geesinimada looga hortago bisad aad u xanaaq badan, oo aad u ballaaran, Habaarradan waxay barteen inay noqdaan kuwo go'aan qaadasho iyo geesinimo la'aan ah. Caadi ahaan aamusnaanta jidka, waxay sameeyaan eeyo waardiye oo isdaba joog ah, laakiin dhab ahaantii kuma haboona magaalada hareeraheeda, halkaas oo aysan jirin wax wicitaan ah oo lagu shaqeeyo. Awoodda dabagalka ayaa ku kala duwan noocyo, laakiin waxay leeyihiin san ku filan oo ay raacaan ciyaarta qaar badanna waxay qaadaan awoodda dhirtu. Khadadka qaarkood ayaa loo kariyaa eeyaha geedka iyo kuwa kale ee lagu xardho. Kulankaan aadka u adag, rakoon iyo ugaadhsade ugaadhsade ah ayaa diyaar u ah inuu wajaho mandiil cabaadaya ama duurjoog xanaaqsan markii la xoqo. Waxay leedahay rabitaan xoog leh oo ay ku qanciso sayidkeeda. Aad u ilaaliya hantida iyo qoyska iyada oo aan lahayn milkiile ka awood badan naftiisa, way awoodaa noqo mid aad u ilaaliya . The Mountain Cur waxaa lagu xusay geesinimadiisa. Eygan ugaadhsiga ah ayaa sanka ka qaban doona dibi madaxa waalan oo dhulkiisa ku hayn doona xitaa orso markii loo hanjabo. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Sababtoo ah a eygu wuu wargaliyaa xanaaqiisa ku saabsan cabaadka iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY uga sarreeyaan si ka sareysa eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee adiga xiriirka eygaaga waxay noqon kartaa guul dhameystiran.
Dhererka: 18 - 26 inji (46 - 66 cm)
Miisaanka: 30 - 60 rodol (13 - 27 kg)
Mountain Cur laguma talinayo nolosha guriga. Waxaa loo kariyaa shaqada waxayna ugu faraxsanaan doontaa shaqo la qabto.
Mountain Cur waa eey aad u firfircoon oo shaqeeya oo u baahan jimicsi badan oo maalinle ah. Marka aanad ugaarsanayn, waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, dheer, brisk soco ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka faa'iideysan doontaa aag ballaaran oo nabdoon oo ay si xor ah ugu socon karto. Noocani wuxuu ku raaxeeyaa waxqabadyada bannaanka iyo isboortiga.
yorkie iyo SUNTZU shih eey
Qiyaastii 3 ilaa 8 eey
Timaha gaagaaban ee Buur Cur waa fududahay in la hagaajiyo. Mararka qaarkood shanlee oo cadayo si aad u saarto timo dhintay iyo kuwo dabacsan. Maydho oo keliya marka loo baahdo maadaama maydhashadu qallajin karto maqaarka, taasoo sababi karta dhibaatooyin maqaarka ah. Ka ilaali kanaalka dhegta timo saa'id ah ciddiyaha ciddiyahana la jaro.
Inkaarado badan oo nooca Terrier-ka ah ayaa lala keenay soogalooti ka yimid Yurub iyo Ameerika waxayna la midoobeen Habaarradii u dhashay. Isku-dhafkan aan la hubin, isku-darka dhibta daran ee kaneecada ayaa soo saaray Cur-garaacis awood u leh inuu la qabsado hab nololeedka hormoodka iyo Hindida. Sooyaalkan taariikhiga ah ee dooxada dooxada Ohio ayaa la rumeysan yahay inuu haysto karbaash qiiqa hidde-wadaha Hindida, marka lagu daro saameynta ugaarsooyinka iyo xoolaleyda. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida geedka ama eyga, laakiin qaar badan ayaa ah kuwa isjiidka fiican sidoo kale. Waxay asal ahaan kasoo bilowdeen xilligii Mareykanku cusbaa oo ay si gaar ah ugu badnaayeen Dooxada Ohio. Maaddaama ay soohdimaha iyo qoysaskooda oo dhami u guureen inay furaan Galbeedka, Eeyohoodii Cur ay la socdeen. Kuwa jecel noocani waxay yiraahdaan marka laga reebo dabeecada eyga, waxaa jira waxyaabo badan oo 'Indian Cur' ah (eeyaha nooca ee ah) qurxinta. In kasta oo loogu yeero 'buur' sababta oo ah faa iidadooda gaarka ah ee ay u leeyihiin deggeneyaasha dhulka keymaha ah, duurjoogta ah, waxay sidoo kale ku sameeyeen sidoo kale meelaha qoyan ama qalalan, ama meelaha kale ee xaaladaha nololeed ee adag. Buugga 'Old Yeller,' oo ku saabsan wiil ku koraya xuduudda Texas iyo eey, oo buugga loogu magac daray, ayaa ah mid caadi ah oo loo yaqaan 'Mountain Cur' (oo ka duwan filimka, kaas oo ay jilayaan eey nooca Lab ah). Buugga, Old Yeller waa eey gaagaaban, jaalle ah oo huruud ah oo ugaarsada iyo geedo, kama cabsanayo inuu la dagaallamo orso buuran markii loo hanjabo, oo dabiici ahaan ayuu aadaa sanka markii uu wajaho dibi waalan. Qoraagu waa mid si cad u qeexaya sharraxaadda noocyadan duugga ah iyo adeegsiga hoggaamiyaha. Magaca 'Mountain Cur' weligiis laguma sheegin buugga, si kastaba ha noqotee waagaas, isirku runtii ma lahayn magac ama aqoonsi shaqsiyeed. Eeyaha Mountain Cur waxaa si tartiib tartiib ah loogu kala saaraa noocyo shaqsiyeed. The Geed Tennessee Brindle , Iibsiga Stephens , iyo Mountain View Cur in loo wada adeegsado isku nooc, laakiin kuwani waxay gaareen aqoonsi shaqsiyeed oo kufilan inay cadeeyaan kooxahooda diiwaangelinta. Dhamaadkii dagaalkii aduunka ee ugu dambeeyay, waxaa aad u tiro yar oo ka mid ah kuwan duugoobay ee Caannada-buuraha ahaa. Dhowr milkiileyaal-adag-adag ayaa wali ku haysta xoogaa keyd ah meelaha go'doonsan iyo gobollada buuraha fog ee koonfur-bari. Iyagu waa kuwa ugu da'da weyn Cur la aqoonsan yahay waxayna ku naaloonayaan dib-u-dhalasho dhowaan, oo la mid ah noocyada kale ee Cur. Ururka 'Mountain Cur Curreed Association' ee Asalka ah ayaa diiwaangeliyey noocyada tan iyo dhammaadkii 50-meeyadii.
Eyga Cur wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee run ah, oo kala duwan, oo u dhashay Mareykanka. Khadadka ugu horreeya waxaa laga raadinayaa Koonfurta Mareykanka oo dhan, gaar ahaan agagaaraha Buuraha Appalachian. Dejiyeyaashu waxay keeneen eeyo reer Yurub ah oo ay la socdaan, ugu horreyn ugaarsiga ugaarsiga iyo kalluumeysiga. Eeyadan waxaa lala tallaabay eeyo u dhashay waddanka, oo ay ugu caansanaayeen kuwa loo yaqaan 'Indian Cur', nooc noocan oo kale ahina wuu soo noolaaday. Hounds waxay keeneen karti udgoon fiican iyo cod dheer, oo bayaan ah (in kasta oo inkaaruhu badankood caan ku yihiin jaritaankooda, Hounds-na waxay leeyihiin bawl gooni ah). Dhiig Terrier ah ayaa ku darsaday ciriiri iyo adkeysi aan nooc kale oo ey ah isbarbar dhigi karin. Hound iyo terrier-ka labaduba wali ilaa maanta tayo ahaan looma barbar dhigo marka loo eego eeyaha kale. In kasta oo aan loo tixgelinaynin nooca adhijir run ah, Cur ayaa sidoo kale wadaagay abtirsiin adhijir-hore Beauceron , khaas ahaan. In kasta oo uusan ahayn dhaqameed dhaqameed, Cur waxaa loo adeegsaday isku soo ururinta keydka adag. Texas Longhorn Lo'da iyo doofaarrada cawdu waxay ahaayeen waxa eygan ku khasbanaadeen inuu maareeyo - looma baahna lo 'ama ido.
Cur-ka casriga ahi wali waa eey ugaarsi ugaarsi ah. Lagu arkay wali kudhawaad ​​Koonfurta, eeygan beeraha ah waa kan labaad. Waxay xamili kartaa wax kasta oo dabagalaha iyo dabocase ku orso , daaq iyo dibi. Sidoo kale, waa eey fasalka koowaad ah. Iyagu sidoo kale waa kuwa celcelis ahaan celcelis ahaan raad raac ah inkasta oo aysan u fiicnayn sida Coonhound mana ku dhawaaqaan raad. Inkaaruhu sidoo kale waa kuwo aad u hanweyn oo ilaalin kara qoyskooda — dabeecad lagu arko argaggixisada iyo badiyaa adhijirrada, laakiin hubaal ma ahan ugaarsi. Sidaa darteed, waxay sameeyaan eeyo badbaado oo heer sare ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in noocani guud ahaan aan ku habboonayn sida xayawaanka la korsado. In kasta oo saaxiibtinimo iyo daacadnimo ah, sida eeyaha ugaarsiga badankood dabeecadda dhabta ah ee Mountain Cur ay ku jirto ugaarsiga, maahan guriga. Dad badan ayaa soo bandhiga noocyo kale oo loo yaqaan 'Mountain Cur' si kastaba ha noqotee, marka laga reebo sanka wanaagsan ee Hound, tani muhiim maahan maadaama Cur wanaagsan uu leeyahay dhammaan astaamaha ugaarsiga saxda ah. Waxay ka heshay aqoonsi gudaheeda diiwaankeeda, OMCBA, ama Asalka Mountain Cur Breeder's Association iyo United Kennel Club.
KSBA = Kemmer Stock Breeder's Association
OMCBA = Ururka Asalka Mountain Cur Breeder
Kani waa Ivy, Cur Cur a 8 bilood jir geedo coon ah.
'Tani waa Benny. Waa 4 bilood jir saafi ah oo OMCBA ka diiwaangashan Mountain Cur oo ay leedahay Tina ee KS. Wuxuu ku dhashay Castle Hill Mtn. Inkaaraha MO. Benny looma adeegsan ugaarsiga gurigiisa waana wehel qoys. Isagu waa eey aad u caqli badan welina wuxuu baranayaa dhaqankiisa wanaagsan ee wiilka. '
Badbaadinta Random, 2-sano jir ah ayaa badbaadisay Mountain Cur
Yaasmiin Madowga Cur iyo madow
Jasmine The Mountain iyo tan madow Cur a iyada oo toy afka ku jira
Waxaan hayaa buur buur ah oo aan helnay markii ay jirtay 9 toddobaad, oo halkaan lagu muujiyey iyadoo 1 sano jir ah. Iyadu waa noocyo dhif ah oo loogu talagalay nooca Mountain Cur. Midabkeedu waa buluug iyo cadaan. Iyadu ma leh wax loo yaqaan 'bobtail' laakiin noocyada kala duwanaan badan ee taranka. Inta badan walaalaheed iyo gabdho isla dhashay oo isla qashin ku wada dhashay waxay ahaayeen kuwo goos goos ah. Waxay haysaa waraaqaha NKC. Dad badan ayaa sheegay in noocan ah noocyadu aysan la jaan qaadi doonin bisadaha iyo xayawaanaadka kale ee yaryar taas oo aan ogaaday in haddii aad wax barato laga bilaabo da 'yarta ay ixtiraami doonaan dhammaan xayawaannada ku jira guriga. Waxaan aaminsanahay in noocani uu u dhaqmo sida coyote ka dibna eey dhab ah. Mararka qaar waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah mararka qaarna aad u dhiirran oo geesinimo leh. Waxay jeceshahay ciyaaraha waxayna umuuqataa inay sifiican ugusameynayso xaafad xaafadeed leh jimicsi badan. Waa la lugeeyaa maalin kasta waxayna jeceshahay inay ciyaarto ciyaar. Iyadu waxay leedahay dareen ugaarsi run ah laakiin dhab ahaantii waxay muujineysaa dhaqankan banaanka guriga. Way ka xishoonaysaa shisheeyaha, ma ahan mid dagaal badan laakiin way is dhiibtaa. '
Midab buluug iyo cadaan ah oo loo yaqaan 'Mountain Cur' oo ah 1 sano jir bisadda leh
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Buurta Cur
Mountain Cur Sawiro
chihuahua oo lagu qasay yorkie
bulldog Faransiiska bulldog ingiriisiga cross
isku darka corgi iyo jack russell
ruugga buluugga ah ee loo yaqaan 'spanel blue roan'
eyga australia ee adhijirka Jarmalka
adhijirka Australiyaanka ah iyo isku darka chihuahua